Isu tinokwanisa kubudisa, kugadzira nekugadzira zvakawanda zve 6-Iodo-3h-quinazolin-4-imwe (16064-08-7) nehutano hwehutsika pasi peCGMP mitemo yekugadzira
I6-Iodoquinazolin-4-imwe, ine CAS registry number (16064-08-7), inonziwo 6-Iodoquinazolin-4 (1H) -one. Icho chiri chechigadzirwa chema Pharmacetical. iyi chikemikari inogona kugadzirwa ne 2-Amino-5-iodo-benzoic acid neEssigsaeure, Formamid. Izvo zvinoitika zvinowanikwa ne reagent ethanol uye imwe mamiriro ekupisa kwemaawa 2. Zvigadzirwa ndeye 87% .Zvinyorwa zvitsva zve3- (3-trifluoromethylphenyl) -6-iodo-4 (3H) -quinazolinone zvigadzirwa zvine thiosemicarbazones, pyrazoles, zvinyorwa azomethine paC-2 zvakagadzirwa. Zvigadzirwa zvakagadzirwa zvakarongedzwa nokuda kwechiitiko chavo chaitarisira kurwisa anticancer; munhu ane chiropa chekenza cell line (HepG2), kenza yemazamu yemazamu (MCF-7) uye human lung adenocarcinoma epithelial cell line (A549) tumor cell lines. Cytotoxicity yezvinhu zvakagadzirwa zvakaratidza zvakanaka IC50 yemimwe michina mukuenzanisa nemishonga inodhaka, doxorubicin. Kune rumwe rutivi, basa remishonga yemishonga yezvigadzirwa zvakagadzirwa neH5N1 yakaratidza kuenzanisa kuita basa rakaoma kana richienzaniswa neZanamivir reference drug. 2-Aminoquinazolin-4 (3H) -iyo yakawanikwa kare sechiono chinotungamirira kukura kwechirwere chemishonga chinotarisana ne plasmepsins. Pano tinoparidza zvidzidzo zvinotungamira nekuedza kugadzirisa inhibitor lipophilicity uye kuwedzera sarudzo zvichienderana nemunhu aspartic protease Cathepsin D. Kushandisa zvinokonzerwa nechinokonzera nzvimbo inowanikwa ye enzyme inopa mukana wekuisa mapoka emapollar (R1) iyo 5-nzvimbo ye2-aminoquinazolin-4 (3H) -imwe inhibitor yakafanana necarboxylic acid isina kutyisa simba reyero. Uyezve, kuiswa kweR1 kwakaita kuti kusarudzwa kwezvinhu zvive mumakwikwi aya kusvika ku100-Pl II, IV vs CatD inhibition. Kubudiswa kwepirp pocket substituent (R2) pa 7-postion ye2-aminoquinazolin-4 (3H) -mwe munhu anobvumira kubvisa pfu muTF ring pasina kunyanya kuora mwoyo kwePlm inhibitory potency. Kubva pane izvi zvakawanikwa, inhibitor yakagadzirwa, iyo inoratidza Plm II uye IV kuvharidzira simba mumatsetse emanomolar ari pasi uye kusarudzwa kunoshamisa pamusoro peCathepsin D pamwe nekuderera kwepophilicity uye kuwedzerwa kusagadzikana.Pakati pe 3- (2,6-dimethylphenyl) quinazolinone series, kuiswa kwe an indol-5-yl akatsiva pa pyrazolo [3,4-d] pyrimidine 3-nzvimbo yakakonzera PI3Kδ yakasimba uye yakasarudzwa (IC50 = 8.6 nM) inhibitor 10d, iyo yakanga iri kupfuura 3630-fold, 390-fold uye 40-fold kusarudza PI3Kδ pamusoro pePI3Kα β uye γ apo kushandiswa kwe 3,4-dimethoxyphenyl kwakaguma nePENTNUMXKδ / γ inhibitor 3e ine simba uye inosarudza ne IC10 mararamiro e50 nM ne 8.4 nM maererano nePI62Kδ nePI3Kγ maererano. Chigumbuso 10e chaivewo chinopfuura 1400-fold, 820-panda kusarudza PI3Kδ pamusoro pePI3Kα nePI3Kβ. Mukubvumirana nemabasa avo anoshamisa ePI3K4 inhibitory activity, makemikari 10d uye 10e vakaratidzira basa rakakura risina kupesana nemasero evanhu B-cell SU-DHL-6. Uyezve, vaviri vari PI3Kδ / γ inhibitor 10e vaiva nemafungiro epa pharmacokinetic anonzwisiswa nehuwandu hwema plasma, kusununguka kwakadzika, kugoverwa kwemazwi mashoma, uye kugamuchirwa kwehuwandu hwehuwandu hwe34.9percent.
MDL Nhamba MFCD00460007
InChI Key PUGXMZKDRVGIHC-UHFFFAOYSA-N
Kemikari Zita kana Nyaya 6-Iodo-3h-quinazolin-4-imwe
Physical Form Crystal-Powder
Molecular Formula C8H5IN2O
Molecular Weight (g / mol) 272.04
ruvara Yakanyanya Pakati Yellow Red-Greyish Red
Melting Point 271 ° C (lit.)
6-Iodo-3h-quinazolin-4-imwe (16064-08-7) Kuchengeta nekubata
(16064-08-7) Tsanangudzo yenjodzi:
◆ Zvinokonzera kutsamwa kweganda.
◆ Zvinokonzera kusuruvara kweziso zvakakomba.
◆ Zvinogona kukonzera kuputika kwekuputira.
(16064-08-7) Precautionary statement:
◆ Dzivisa kufema guruva / fume / gasi / mhepo / mhepo / spray.
◆ Pfeka magasivha ekudzivirira / zvipfeko zvinodzivirira / kudzivirirwa kweziso / kuchengetedzwa kwiso.
◆ IF INHALED: Bvisa mweya wakachena uye ramba uchizorora uri mukana wakasununguka kupema.
◆ Dzinga zviri mukati / mudziyo maererano nemitemo yemunharaunda / yeruwa / yenyika / pasi rose.
Nhepfenyuro itsva ye4 (3H) -quinazolinone dhiyabhorosi: syntheses uye kuongororwa kwezvinyorwa uye zvekare zvekare
Nhepfenyuro itsva ye3- (3-trifluoromethylphenyl) -6-iodo-4 (3H) -quinazolinone zvigadzirwa zvine thiosemicarbazones, pyrazoles, azomethine pamwe neC-2 zvakagadzirwa ...
Mishonga Chemhemia Research 2018 vol. 27 # 2 p. 571 - 582,
Kuwanikwa kwevanovhura quinazolinone zvigadzirwa sepamusoro uye zvinosarudza PI3Kδ uye PI3Kδ / γ inhibitors
PI3K4 uye PI3KY inodzora maitiro ezvirwere zvemuviri. Kusarudza PI3Kδ kana PI3KY inhibitors uye maviri PI3Kδ / γ inhibitor vane mikana yekurapa zvirwere zvemumunwa-medived uye hematological malignancies ...
6-Iodo-3h-quinazolin-4-imwe (16064-08-7) Kurayira Kuwanda uye Mutengo:
2 anodzokorora nokuti 6-Iodo-3h-quinazolin-4-one (16064-08-7)
Iwe unogona kunge uchitsvaga kamukodhi kemikemikari yekugadzira kambani asi iwe hauna kuwana imwe zvakare? APICMO ndiyo mhinduro kumatambudziko ako. Isu tinozivikanwa nehukuru hwedu mune makemikari synthesis uye zvinogadzira michina, uye iwe unogona kuvimba nesu kwehutano nekuguma kwezvigadzirwa-zvigadzirwa. 6-Iodo-3h-quinazolin-4-imwe (16064-08-7) ndeimwe yemakemikari edu anozivikanwa, ayo akaitwa kuti asangane nezvakakodzera zveMitemo nemitemo yeCGMP uye urongwa hwekutaridzika kwehutano.
Ichi chigadzirwa ndecheMishonga yemishonga yechigadzirwa. Mukugadzirira, inobudiswa kuburikidza nekutanga kwe2-Amino-5-iodo-benzoic acid uye Essigsaeure Formamid. Izvi zvinoitika nekubatsirwa kweethanol uye kuipisa kwemaawa anenge 2. Izvi zvinobereka 87% ye6-Iodo-3h-quinazolin-4-imwe (16064-08-7). Uyewo, chigadzirwa chinosanganisira kushandiswa kweAzomethine meieties uye thiosemicarbazoned pyrazles pa c-2. Mushure mokuputika kwezvinhu, izvo zvakagadzirwa zvakabva zvaongorororwa kuti zviongorore zvinoratidzira zvechirwere chetachiona chepamuviri chepabonde, chiropa chekenza chepabonde mutsara, chiremera chemasero masero uye huma mapapu adenocarcinoma epithell cell line.
Ichi chigadzirwa chinoshanda semushonga wemishonga pakati
Ichi chikemikari chinogara muchibvumirano che APICMO, uye iwe unofanirwa, saka, unzwe wakasununguka kuronga uye kuita chero mibvunzo kubva kwatiri.
Chimiro chimiro che 6-Iodo-3h-quinazolin-4-imwe (16064-08-7)
6-Iodo-3h-quinazolin-4-one (16064-08-7) product specifications
HAKASI HERE. 16064-08-7
Kemikari zita 6-Iodo-3h-quinazolin-4-imwe
Kuwedzera (g / cm 3 2.11 g / cm3
IUPAC zita 6-iodo-1H-quinazolin-4-imwe
Nyaya yekubikira (˚C) 401 ºC pa 760 mmHg
(g / mol) 271.945 g / mol
Chimiro chemuviri Crystal-Powder
6-iodoquinazolin-4 (3h) -one
6-Iodo-3h-quinazolin-4-imwe (16064-08-7) muviri
Iyo makemikari inogadziriswa mumvura.
16064-08-7 hydrogen bonding
Ichi chemikemikari yakachena yakachena
6-Iodo-3h-quinazolin-4-imwe yakaumbwa zvinhu
Topological Polar Surface Area 41.5 A ^ 2
Zvakakwana masasa 271.945 g / mol
6-Iodo-3h-quinazolin-4-imwe nzira yekushandisa
Ichi chemikemikari ine mafirimu masere anoita sezvinotevera;
6-Iodo-3h-quinazolin-4-imwe inopisa uye chigadzirwa pasi
Chigadzirwa chacho chinonyanya kureva yemishonga inopindirana
Njodzi dzinobatanidza ne6-Iodo-3h-quinazolin-4-imwe
GHS chikamu zviratidzo
Mikemikari inogona kukonzera mune dzimwe nyaya kana zvichinyatsobatana nemuviri wako zvinosanganisira;
Kushungurudzwa kweganda uye kuora kwemhuka kunogona kutungamirira kukuora, kubwinya, nekuputika
Kushungurudzwa kweziso izvo zvingaguma kuva dambudziko rekusingaperi kana risingaoneki
Kufuridzirwa kwekuputira kana kuvharwa
Mune imwe nyaya yekupinza, inogona kukonzera kurutsa uye kurwisa
6-Iodo-3h-quinazolin-4-imwe nzira dzekuchengetedza uye kudzivirirwa kwomunhu oga
Nguva dzose iva nechokwadi chokuti une zvipfeko zvekudzivirira kuti zvikudzivirire kubva pakusangana zvakananga nechigadzirwa. Izvi zvinosanganisira kupfeka magirazi akaremara, kudzivirira maziso-magirasi, uye chiso chemasikati nemhepo inopisa kwete kukanganwa shangu dzinodzivirira.
1. 6-Iodo-3h-quinazolin-4-imwe (16064-08-7) inyanzvi yekugadzira
Nzvimbo yako yekushanda inofanira kunge yakave yakagadzirirwa nekuchengetedza midziyo yekuchengetedza kuitira kuti uve nechokwadi chokuti wakagadzirirwa zvakanaka kana zvichiitika njodzi dzinokurumidza uye dzisingatarisirwi. Iwe unofanirwa kuva nemichina yakadzimisa moto, mudziyo wokuchenesa mweya, vateki, uye fume hood. Iva nechokwadi chokuti laboratori ine mhepo yakakwana, inoputira nemvura ine mvura uye kuchengetedza mvura.
Chii chaunofanira kuita kana iwe uchinge uchingosangana nemakemikari? Iva nechokwadi chekutora zviito zvinotevera;
Nenguva iyo thanya kumapopu uye shenesa nzvimbo yakakanganiswa zvakakwana nemvura yakawanda uye isina kuchenesa. Kana kuparadzaniswa kwacho kwakanyanya, bvisa mbatya dzakakanganisika uye ushambidze usati wagadzirira kupfeka nguo dzakachena.
Shenesa meso ako nemvura yakawanda yemvura kune maminitsi e15. Iva nechokwadi chokuti hauna lenzi pairi nyore kuchenesa. Kana kutsamwa kuchiripo, tsvaka rubatsiro rwechiremba.
Munhu akakodzera anofanira kutamirwa kunzvimbo yakazaruka kana nzvimbo yakanaka yemhepo iyo pakarepo kuwana mweya mutsva. Kana iye / iye ari kutarisana nematambudziko ekufema, ape mhepo yekufema asati aenda naye kuna chiremba.
Munhu wacho anofanira kuchenesa muromo wake nemvura yakachena asati atora anenge hafu yeitaundi yemvura. Cherechedza kuti haufaniri kumbodzisa kurutsa.
16064-08-7 inoshamisa uye inogona kuparara nyore nyore kana yakachengetedzwa pedyo ne-acid acid uye oxidizing agents. Chengetedza kure nemhando ipi zvayo inogona kuita kuti zviitike saizvozvo. Uyewo, chengetedza kuti mudziyo wacho wakavharwa zvakasimba. Zvichengetedze pamusasa wekupedzisira munzvimbo yakaoma uye kure nekusvika kwevashandi vasingabvumirwi.
Paunoshanda nekemikemikari, iva nechokwadi chekucherechedza zvinotevera;
Isa zvipfeko zvekudzivirira kuti utachiona husati hwasvika mumaziso ako, ganda, muromo kana kuti kuinyora
Usapinda mumoto wayo, mhepo kana guruva
Usashandise pamwe chete nemishonga chero ipi zvayo inogona kupisa kuora
Shanda kubva pane nzvimbo yakanaka
Iva nechokwadi chokuti kune kuwanikwa kwezvigadziro zvekuchengetedza zvakadai semafuta, zvidzimiso zvemoto, uye yekuchengetedza mvura
5. Mushure mekushandisa 6-Iodo-3h-quinazolin-4-imwe (16064-08-7)
Ndeapi matanho aunofanira kutora mushure mekushanda na 16064-08-7?
Chinhu chekutanga uye chinonyanya kukosha ndechekuchengeta uhu hwenyu. Usapinda mune mamwe mabasa usati washamba maoko ako, uchishamba uye uchisunga mbatya dzakachena.
Bvisa zvidha zvisina chinhu uye zvigadziriswe uye uone kuti unozvichengeta maererano nemitemo nemitemo yenyika yako
Chengetedza zvakasara zvakachengeteka mumhepo yechando
6. 6-Iodo-3h-quinazolin-4-imwe (16064-08-7) nhanho dzakanganisa
Pane dzimwe nguva, iwe unogona kungova usina unhucky, uye iwe unopedzisira wava mumamiriro asingatarisirwi. Izvi ndizvo zvinofanira kuitika mumamiriro ezvinhu akadaro;
Iwe unotanga kutanga nekukanda chigadzirwa chakasvibiswa nechinhu chinoputika uye kuchikanda mumarara. Iva nechokwadi chekuti ventilate iyo nzvimbo uye ushandise compressor yemhepo kuti ubvise mhepo yakanyanyisa. Iva nechokwadi chekuti iwe paunoita izvi, une nguo dzekudzivirira pane kusanganisira masikisi kuti usapindira mafungiro akawandisa. Geza nzvimbo yakakanganiswa nemvura yakawanda woipisa.
Iwe unogona kushandisa michina isina-oxidizing yakadai seC CO2 kuisa moto.
Ichi chemikemikari yakanyatsogadzikana kana yakashandiswa zvakakodzera. Izvi zvinosanganisira kushandisa kure nemiti ipi zvayo inogona kukonzera kuora uye kuichengetedza pakudzvinyirirwa kwakanaka nekushisa.
8. 6-Iodo-3h-quinazolin-4-imwe (16064-08-7) kudyiwa kwezvinhu
Iwe unofanirwa kubata ichi chemikemikari semarara chaiwo uye kuibvisa iyo inotevera mitemo, yezvematongerwo enyika uye yepasi rose nemitemo. Iwe unogonawo kuzvisarura nokuzvipisa uchishandisa chemikiniti incinerator.
9. 6-Iodo-3h-quinazolin-4-imwe (16064-08-7) mashoko ekutumira
Kuva chigadzirwa chakasimba, 6-Iodo-3h-quinazolin-4-imwe (16064-08-7) inogona kunyatsoendeswa kutakurwa nehombe kana mweya.
16064-08-7 mutemo wekutonga
Iwe unofanirwa kuchengeta mitemo yose, yezvematongerwo enyika uye yepasi rose nemitemo mumatunhu ose ekushanda pamwe nekemikemikari.
16064-08-7 zvigadzirwa zvemhizha
Zvose zvakapiwa apa zvakarurama zvichibva pane zivo yedu. Zvinoreva kuti uve mutungamiri kana uchibata makemikari uye naizvozvo, hatisi mhaka yezviito zvako. Vadzidzisi vedu vakanyatsodzidziswa uye vane ruzivo rwakawanda munyaya dzine chokuita nekugadzirwa kwezvinhu, makemikari kuongororwa, upenyu hwesainzi, zvinhu zvesayenzi, uye chromatography.
6-Iodo-3h-quinazolin-4-imwe (16064-08-7) kurongeka kukuru uye mutengo
16064-08-7 inoshandiswa pakugadzira, kubudisa, nekutsvakurudza. Kana iwe uchida kune chimwe chezvinangwa izvi, sarudza wakasununguka kuita mazano akawanda kubva kwatiri chero nguva.
National Centre For Biotechnology Information, US. National Library Of Medicine, PubChem 6-Iodo-3h-quinazolin-4-imwe (16064-08-7) Zvikamu 1-10.
Chibvumirano Chetengo Purogiramu yeUnited States, Chikamu 4, pg 74.
Friedrich Konrad Beilstein, Reiner Luckenbach, Springer-Verlag, Beilstein Handbook ye Organic Chemistry: Fifth supplementary series dzinofukidza mabhuku kubva 1960 kusvika 1979, Volume 27, Chikamu 18.
Bhuku reScientific & Industrial Research, 2006, Indian Journal Chemistry: Organic kusanganisira mishonga. Chikamu B Chemistry, Organic.
Yakanakisisa 6-Iodo-3h-quinazolin-4-imwe uye basa randakave narina, Nice experience